जसले नेपालको निर्माण गर्‍यो, त्यो शक्ति किनारामा पर्खिरहेको छ । यता ेनेपालको दुर्गति दिनदिनै बढेर गएको छ, आमनागरिकको कुरा सुन्ने कोही पनि छैन । जे छ, राजनीति छ । जे छ सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमात्र छ । बाँकी बिधि छैन, अनविधि भइरहेछ ।
देशको भार थाम्ने कसले ? जनताप्रति उत्तरदायी हुने को ? राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने कसले ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफदेहिता सरकार, संसद, सांसददेखि शितल निवाससम्मलाई पटक्कै छैन ।
यही कारणले देशमा भागबण्डातन्त्र चलिरहेको छ । जनता सेवा पाइन्छ भनेर आश लगाएर बसेका छन्, जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो लाभ र स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ भनेर त्यतैतिर केन्द्रित भइरहेका भेटिन्छन्, देखिन्छन् । जनता के चाहिरहेका छन्, जनताको तत्कालको आवश्यकता के हो ? भूकम्प, बाढीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिले नष्ट भ्रष्ट पारेको राष्ट्रिय जीवनलाई कसरी शान्त र सहज पार्ने भन्ने न चिन्ता छ, न चासो नै । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाले देश बर्बाद भइरहेको छ, जनताले खोजे म यहीँ छु भन्ने पूर्वराजाले अव त खबरदारी गर्न निस्कनुपर्ने हो, त्यस्तो स्थिति देखिदैन । आखिर किन पूर्वराजाले आमनागरिकको पीडावोध भएर पनि अग्रसर नभएका होलान् ? धरै विश्लेषकहरुले यस बारेमा मन्थन गरिरहेका छन् ।
एकथरि राजतन्त्रवादी रनभुल्लमा छन् । स्वयम् पूर्वराजा के चाहन्छन् ? यो प्रश्नले तिनलाई पिरोलेको छ । गणतान्त्रिक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न, गराउन भइसकेका स्थान्ीय चुनाव र हुन गइरहेका प्रादेशिक र संसदीय चुनावमा आफूलाई राजावादी र हिन्दु धर्मवादी अनि संघीयताका विरोधी बताउने पार्टी र व्यक्तिहरु नै तदारुकताका साथ लागिपरेको देख्दा अरु राजादादी रनभुल्लमा पर्नुस्वभाविक पनि हो ।
पत्यसो त पूर्व राजाको वैंकक, सिंगापुर, दिल्ली, बेइजिङ आदि स्थानहरुको भ्रमणका बेलामा पूर्वराजालै फलोनो फलानो व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्नुभयो भन्ने समाचारले मात्र पनि खुशी हुने राजादावीहरु त्यो र त्यस्ता समाचारहरु बिस्तार बिस्तार सेलाउन थालेपछि फेरि निारश बन्न थाल्छन् ।
अर्काथरि राजावादी यस्ता पनि छन्, जो हरेक पिर्वमा आउने पूर्वराजाको सन्देशको लेखाजोखा गर्छन्, अर्थ निकाल्छन् अनि भित्र भित्रै रमाउँछन् । यस्तालाई यति भए पनि पुग्छ । अव दशैंको टिकाका दिन आउने पूर्वराजाको शुभकामना सन्देशको बेसब्रीका साथ प्रतिक्षा भइरहेको छ तिनलाई । आखिर यस्ता राजावादी भेटिए, जो हनुमान ढोका दरवार परिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा सम्पन्न नरदेवी नाचको दृश्य देखेर छटपटिएका थिए । राजा उपस्थित हुनुपर्ने स्थानमा को को उपस्थित भएर परम्परागत नाच हेरेको तिनलाई पाच्य भएन । कट्टर राजावादी पनि छन्, त्यसो त यस्ता शरीफ र इमान्दार राजावादी मात्रै छैनन् यहाँ । पैसा पाएर राजावादी बनेकाहरु पनि थुप्रै छन् भनिन्छ । नाम चलेका लेखक, पत्रकार, नेता,क लाकार, कुटनीतिज्ञहरु पनि यस्ता सूचीमा छन् । स्रोत रोकिने हो भने ती फेरि आफ्नै पुरानै संरचना वा जसले बढी बोली लगाउँछ त्यतातिर ढलक्कै ढल्किन र हानिन बेर लगाउँदैनन् । यद्यपि उनीहरु अहिले पनि पार्टीका नेता र प्रभावशाली व्यक्तिहरुका निकट नै रहेका पनि देखिन्छन् ।
हो, यही कारणले पूर्वराजाले सुन्ने, देख्ने र अनुभव गर्ने कुनै पनि मौकामा तिनीहरु पुरापुर राजावादी हुनेगरेका छन् । जव पूर्वराजाको ओझेल छ भन्ने बुझ्छन्, त्यस्ता मौसमअनुसाकरा ट्यूनिक लगाउनेहरु लोकतन्त्रको पछि पछि लागेको पनि देखिन्छ । राजावाद तिनका अस्थिरता र तिनलाई अवसर दुबै हुनेगरेको छ ।
यो कटु सत्य हो, भनिन्छ । भनिन्छ, त्यस्तैहरुको बोलवाला छ । सम्बन्धित निकायले पनि त्यस्तैहरुको कुरा सुन्ने र तिनलाई खुवा खुवाउने गरेको चर्चा छ बजारभरि । अनि बेला बेलामा तिनैलाई साक्षात्कारदेखि अन्य मौकाले पुरस्कृत पनि गरिन्छ । जो सच्चा राजावादी र हिन्दुवादी छ, ती चैं गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन भएर मुलुकमा यो गणतन्त्रले दह्रोसँग दरा गाड्न लागिसक्यो भनेर मनभरि चिन्ता पालेर भुटभुटिइरहेका छन् ।
माथि उल्लेख गरेझैं, तिनीहरु पूर्वराजा के चाहन्छन् ? भन्ने प्रश्नमै आफूहरुलाई फनफनी घुमाइरहेका छन् । यता गणतन्त्रवादीहरुले चाहेजस्तो, खोजेजस्तो धमाधम कामहरु सम्पन्न गरिरहेका छन् । उता राजावादी रहिन्दुवादीहरु राजा आउ देश बचाउ भन्दै अव राजा सडकमा उत्रनेछन् भन्ने सपना पालेर बसेका छन् । प्रश्न उठेको छ, के देशको अराजकता र अस्थिरता, असुरक्षा र अशान्ति ठिकठाक पार्न पूर्वराजा सडकमा उत्रनेछन् भन्ने मनको लड्डु घीउसँग खाइरहेका देखिन्छन् ।
न त पूर्वराजासँग सम्बन्धितहरुले यस विषयमा मुख खोल्न, न स्वयम् पूर्वराजाले नै जनताका सामु पुग्ने कुनै कृयाकलापको तैयारी गरेका छन् । जनता गुहारिरहेका छन्, पूर्वराजाले सुनेका छन् तर साँघुरिएर बसेका छन् । दिनगन्ती गर्‍यो, चित्ताकर्षक र राष्ट्रिय चिन्ता र चासोले भरिपूर्ण पूर्वराजाका सन्देशहरु सुन्यो, भ्रमणहरुको लेखाजोखा गर्‍यो, बस्यो । यता बागमतीमा पानी निरन्तर बगेको बग्यै छ...। समय किन रोकिन्थ्यो र...।